မဆုမွန်: ရွေးကောက်ပွဲအမှတ်တရနဲ့ နေမျိုးကျော်
၂၀၁၀ပြည့်နှစ် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နှစ်ထောင့်တစ်ဆယ် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ တွေ ထွက် ၂၀၀၈ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေကို အရင်းတည်ပြီး အာဏာကိုင်တွေက ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲကို ကြိုဆိုသူ၊ ထောက်ခံသူ၊ ရူံ့ချသူ၊ ကန့်ကွက်သ၊ူ အွန်လိုင်းမှာရော၊ လေလိူင်းမှာရော၊ ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရော အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ ဗြောင်းဆန်အောင် လူပ်ရှားပွားများနေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲကို ဘယ်လို ၀င်ကြမလဲ၊ ၀င်မှာလား၊ မ၀င်ဘူးလား စတဲ့မေးခွန်းတွေ ကြားထဲမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၇နှစ်က အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ်မှာ ၂၀၀၃ခုနှစ် မေ ၂၇ရက်နေ့ ရွေးကောက်ပွဲ နှစ်ပတ်လည်နေ့ သရုပ်ပြပွဲအတွက် ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ် လူငယ်တာဝန်ခံတွေ လူငယ် ခေါင်းဆောင်တွေ၊ လူငယ်အဖွဲ့တွေ ပူးပေါင်းပြီး တကယ့်ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ အစီအစဉ်တွေအတိုင်း ပါတီတွေထောင်၊ မဲဆွယ်စည်းရုံးမူတွေလုပ်၊ မဲစာရင်းထွက်တဲ့အထိ၊ တကယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လို၊ လူပ်ရှားခဲ့ဖူးတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို သတိရမိပါတယ်။
ပိုပြီး အမှတ်ရစရာကတော့ ကျွန်မ တို့ ရန်ကုန်တိုင်း အဖွဲ့ချူပ်ဗဟိုရုံးမှာ ရွေးကောက်ပွဲနှစ်ပတ်လည်နေ့မှာ လူငယ်တွေ ရွေးကောက်ပွဲ သရုပ်ပြကျင်းပနေချိန်မှာ ကျွန်မတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မေ၃၀မှာ အာဏာပိုင်တွေ ဘက်က ယုတ်မာပက်စက် ရက်စက်တဲ့ အတွေးအကြံနဲ့ ဒီပဲရင်းအရေးအခင်းနဲ့ လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားတာကို ခံလိုက်ရတာပါပဲ။ ကျွန်မ မှတ်မှတ်ရရ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက် နောက်တစ်ခုကတော့ အခု နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ်တွေနဲ့ ထောင်သွင်း အကျဉ်းချခံထားရတဲ့ ကျွန်မတို့သူငယ်ချင်း နေမျိုးကျော် ကိုယ်တိုင် ရွေးကောက်ပွဲ သရုပ်ပြ နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာ ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့လို့ပါပဲ။ အခုဆိုရင် သူလည်း ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုတဲ့ အသံဗလံတွေကို အကျဉ်းခန်း တစ်နေရာကနေ ကြားနေရတဲ့အခါ အမှတ်ရနေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ :(
သူ့ကို ကျွန်မ သတိထား မိတဲ့ အချိန်မှာ သူ့မျက်နှာက ဟန်ဆောင် ဖုန်းကွယ်မူ ကင်းပြီး ဘာ အရိပ် အယောင် မျက်နှာဖုံး ကိုမှ တပ်ထားတာ မရှိပဲ အရမ်းရှင်းသန့် ကြည် လင်တယ်။ မျက်ခုံး ကောင်းကောင်း နှာတံပေါ်ပေါ် တိကျ ပြတ် သားတဲ့ နုတ်ခမ်းအစုံနဲ့ ယောက်ျား ကောင်း ပီသတဲ့ ရုပ် တော်တော် လေး သန့်တဲ့ ပညာတတ် လူငယ်လေး တစ် ယောက် လို့ မြင်မိတယ်။ နောက် အထူးခြား ဆုံးက သူ ပြုံး လိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ တကယ်ပီဘီ ကလေးငယ် တစ် ယောက် လို အပြစ် ကင်းစင် လွန်းတာကို သတိထား မိတယ်။သူ့ နံမည် နေမျိုးကျော် တဲ့။ သင်္ဃန်း ကျွန်းက အဖွဲ့ချူပ် အဖွဲ့ဝင် လူငယ် တစ်ယောက် ဖြစ်တယ်။
နောက် သူက စက်မူ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား တစ်ယောက် ဖြစ်တယ် ဆို တာ ပါ သိရလို့ အဖွဲ့ချူပ် လူငယ် တွေထဲမှာ ကျွန်မတို့ဟာ တက္ကသိုလ် ကျောင်း သား ချင်း ချင်း ဖြစ်လို့ ကျောင်းကိစ္စ တွေ ဆွေးနွေး ကြတယ် နောက် ကိုယ် ၀ါသနာ ပါရာ စာပေ အနုပညာ အကြောင်း တွေ ဆွေးနွေး ကြတဲ့အခါ နေမျိုး ကျော်နဲ့ ကျွန်မတို့ဟာ ဘာသာ စကား တူတဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ် လာကြတယ်။ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ပွဲတွေ စာပေ ဟောပြော ပွဲတွေနဲ့ စာဖတ်ဝိုင်း တွေလောက်ပဲ သူ ရံဖန်ရံခါ လာတာ တွေ့ရတယ်။ ဒေါ် အောင် ဆန်း စုကြည် နေအိမ် ခြံတွင်း လုံခြုံရေးတွေ ကျတဲ့အခါ ကျွန်မ အရမ်း ရင်းနှီး တဲ့ သူငယ်ချင်း တွေနဲ့အတူ လိုက်ပါ တာဝန် ယူတာရှိတယ်။ သူတို့ ပြန်ပြော ချက် တွေအရ နေမျိုးကျော်ဟာ ပုံမှန် အရ စကား အင်မတန် နည်းပြီး သူ့ဘာသာ အေးအေး ဆေးဆေး နေတတ်ပေမယ့် စာပေ အကြောင်း ဆွေးနွေးတဲ့ နေရာမှာတော့ အမြဲတမ်း ဦးဆောင် ဆွေးနွေးသူ ဖြစ်တယ် ဆိုတာ သိရတယ်။
ပါတီရဲ့ ဆိုင်းဘုတ် တွေ ကြေငြာဘုတ်တွေကို အပြာရောင် ဆေးရောင်နဲ့ စာလုံး အကြီးကြီး တွေ ရေးချယ်ပြီး နေကြပါပြီ။ ကျွန်မတို့ပါတီရဲ့ လုပ်ဆောင် ချက်တွေ အကုန်လုံးက အများ သဘောတူချက်နဲ့ လုပ်ကြတာ ဖြစ်ပေမယ့် ငြိမ်းချမ်းရေး ပါတီ တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကန့်ကွက် ရူံ့ချမူ အချေအတင် ဆွေးနွေးမူ ပြသနာ တစ်စုံ တစ်ရာ မရှိပါဘူး။ နေမျိုး ကျော်က သူ့ ထုံးစံ အတိုင်း ပြုံးပြီး ငါတို့တွေ ဒီလိုသာ ရန်မဖြစ်ကြပဲ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေး ပွဲတွေ လုပ်ခွင့် ရကြရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ အရွှမ်းဖောက်ပါတယ်။
သူများပါတီတွေကတော့ အခြေ အတင် ဆွေးနွေး အော်ဟစ် ငြင်းဆန် လူပ်ရှား နေကြတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်မတို့ ကတော့ ငြိမ်းငြိမ်း ချမ်းချမ်း ငြိမ် သက်ပြီး အလုပ် ကိုယ်စီ လုပ်နေပါတယ်။ တစ်ဘက်နဲ့တစ်ဘက်လဲ သူ ဘာလုပ်တယ် ငါဘာလုပ် တယ် ဆိုတာ တစေ့ တစောင်း အကဲခတ်ကြ နောက် စပ်စုကြပေါ့ ကျွန်မကတော့ တစ်ဘက်ပါတီက အနား ကပ်လာ ထောက် လှမ်းလာ ရင် အော် ထုတ်တဲ့ တာဝန် ယူပါတယ်။
မှတ်မှတ်ရရ လွတ်မြောက်နယ်မြေကို ရောက်ရှိလာတဲ့ လူငယ်ရှေ့နေ စောကျော်ကျော်မင်းက ကျွန်မကို ပြောလာ ပါသေးတယ် အစ်မကို မှတ်မိသေးတယ် ပါတီတွေ ထောင်တုန်းက အရမ်းစွာတာပဲတဲ့ စတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဝေဖန်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဆိုးပြီး လိုက်လုပ်လို့တဲ့လေ။ သူကလဲ အဲ့တုန်းက ပါတီထောင်တဲ့ သူတစ်ယောက် အပါအ၀င် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလွတ်မြောက်နယ်မြေကို ရောက်နေတဲ့ ကျွန်မရဲ့ချစ်စွာသော သူငယ်ချင်း အောင်အောင်သိုက်ကတော့ ပါတီဥက္ကဌ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်အုပ်လေးချီ နမောတသနဲ့ အစချီပြီးမှ ပုံတိုပတ်စတွေ ဥပမာ ဥပမေယတွေနဲ့ မှင်မောင်းကောင်းကောင်း စည်းရုံးဟောပြောလို့ သူက လူကြိုက်အများဆုံး ကမ်ပိန်နာ တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
တက်ရောက်လာတဲ့ ဆန္ဒမဲပေးမယ့် အဖွဲ့ချူပ်အဖွဲ့ဝင်တွေကို ပါတီတွေ အလှည့်ကျ စည်းရုံးရေး ဆင်းရပါတယ်။ သူတို့ မဲပေး ချင် လာအောင် ကျွန်မတို့ပါတီတွေ ရဲ့ ရပ်တည် ချက် ပြည်သူ့အပေါ် လုပ်ပေးနိုင်မယ့် အာမခံ ချက်တွေ ဥပဒေတွေ စသဖြင့် စည်းရုံး ဟောပြော ကြပါတယ်။ ပါတီ တိုင်းရဲ့ စည်းရုံး လူံ့ဆော်မူတွေက တကယ့်ကို သရုပ်ပါပြီး လက်သီး လက်မောင်းတွေ တန်းပြီး ဟော ပြောကြ တာ အရမ်းကို အားရ စရာကောင်းပါတယ်။ လူငယ်တွေရဲ့ ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေ ရပ်တည်ချက် ယုံကြည် ချက် တွေဟာ အရမ်းလည်း နားထောင် ကောင်းပါတယ်။ နေမျိုးကျော်က မဲဆန္ဒရှင်တွေကို လေ အေးအေး လေးနဲ့ စည်းရုံးသလို တစ်ဘက် ပါတီတွေက မေးလာတဲ့ စိန်ခေါ်တဲ့ ချောင်ပိတ် မေးခွန်းတွေကို ပြတ်ပြတ် သားသား ဖြေဆိုနိုင်ခဲ့လို့ ပရိတ်သတ်ရဲ့ လက်ခုတ်သံ တဖြောင်းဖြောင်း ရခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီ့နေ့ကတော့ မေလ ၂၈ရက်နေ့ပါ။ ရလာတဲ့ ဆန္ဒမဲတွေကို မဲရုံလူကြီးတွေရဲ့ရှေ့မှာ မဲခွဲတဲ့အခါမှာတော့ ကျွန်မတို့ ပါတီက ဆန္ဒမဲအများဆုံး ဒုတိယနေရာကို ရခဲ့ကြပါတယ်။ ဒုတိယရရတဲ့အကြောင်းကတော့ ကျွန်မတို့ ပါတီကို မဲပေး ကြ ပေမယ့် ပုံစံ မမှန်ကန် တဲ့ ပယ်မဲအရေအတွက် များလို့ပါပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲ့ဒီ့နေ့က မဲအောင်နိုင်ပွဲ အဖြစ် ငြိမ်းချမ်းရေးသင်္ကေတ အထိမ်းအမှတ် အပြာရောင် ဆင်တူ ၀တ်စုံ လေးတွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် လူ့အခွင့်အရေးပါတီအဖွဲ့ဝင် ကျွန်မတို့ လက်ချင်းချိတ်ပြီး ပျော်ရွှင်မြူးတူး အော်ဟစ် ကခုန်ခဲ့ကြ ပါတယ်။
အဲ့ဒီ့အချိန်မှာ ကျွန်မတို့ခေါင်းဆောင် အန်တီကလဲ တစ်တိုင်းပြည်လုံး အတိုင်းအတာအနေနဲ့ ခရီးစဉ် လှည့်လည် နေပြီး ပြည်သူတွေ သိန်းနဲ့ချီပြီး လမ်းပေါ်ထွက် အားပေး နေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ များမကြာမှီ ရက်မှာပဲ မြန်မာသမိုင်းမှာ ဆိုးဝါးလွန်းတဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး လိုလားသူ ပြည်သူတွေနဲ့ တသားတည်းဖြစ်နေတဲ့ အန်တီစုနဲ့ဘဘဦးတင်ဦးနဲ့တကွ အဖွဲ့ချူပ်အဖွဲ့ဝင်တွေကို ဒီပဲရင်း ကျည်ရွာနားမှာ အစုလိုက် အပြုံလိုက် ညအမှောင်မှာ သစ်ပင်တွေက မီးမောင်းထိုးပြီး ချောင်ပိတ် ပြီး တုတ်နဲ့ရိုက် လှံနဲ့ထိုး သေနတ်နဲ့ပါ ပစ်ပြီး အသေသတ်တဲ့ ဒီပဲရင်း လူသတ်ပွဲကြီး ဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတာ မသိကြ သေးချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီ့မေ၃၀ရက်နေ့မှာ ခေါင်းဆောင်ကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ဖို့ အာဏာပိုင်တွေဘက်က မတရား ကလိမ်ကကျစ်ညဏ်တွေနဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ခေါင်းဆောင် အန်တီစုနဲ့ဘဘဦးတင်ဦးအပါအ၀င် အဲ့ဒီ့တုန်းက လမ်းကြောင်းလုံခြုံရေးယူခဲ့တဲ့ ရဲဘော်တွေ ထောက်ခံအားပေးရင်း လိုက်လာတဲ့ ရဟန်းရှင်လူပြည်သူတွေ သွေးမြေကျခဲ့ရပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတဲ့ အမှတ်ရစရာတွေ ကို သတိရမိတိုင်း ဒီပဲရင်းလူသတ်ပွဲဆိုတာကိုလဲ အမြဲအမှတ်ရနေမိတယ်။ ဘယ်တော့မှ မမေ့မယ့် အဖြစ်တွေပေါ့။
တစ်နှစ်နီးပါး ချူပ်နှောင် စစ်ဆေးပြီး နောက်မှာမှ စာရေး ဆရာ တဦး လည်း ဖြစ် ၊မြန်မာ ပြည် တွင် ပထမ ဦး ဆုံး အဖမ်းခံ ဘလော့ဂါ တဦးဖြစ် သူ နေဘုန်းလတ် ( ခ ) နေ မျိုးကျော် ကို ၂၀၀၈ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၀ရက်နေ့မှာ အင်းစိန် မြို့နယ် အင်းစိန်ထောင်တွင်း အနောက်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးမှာ တရားသူကြီး ဒေါ် စိုးဥာဏ်က တရား စွဲ ဆို ထားသော ပုဒ်မ ၅၀၅ ( ခ ) နှင့်ထောင် ဒါဏ် ( ၂ ) နှစ် ၊ ပုဒ်မ ၃၂ ( ခ ) / ၃၆ နှင့်ထောင် ဒါဏ် ( ၃ ) နှစ် ခြောက် လ နှင့်အီလတ်ထရောနစ် ပုဒ်မ နှင့်ထောင်ဒါဏ် ( ၁၅ ) နှစ် စုစုပေါင်းထောင် ဒါဏ် အနှစ် ( ၂၀ ) နှင့်ခြောက် လ ကျခံစေထောင် ဒါဏ် အနှစ် နှစ်ဆယ် နှင့်ခြောက် လ ကျခံ စေ လို့ မတရား သဖြင့် အမိန့်ချလိုက်ပါတယ်..နေမျိုးကျော်ကို အမိန့်မချခင်ကပဲ ကိုနေမျိုးကျော်ရဲ့ ချစ်စွာသော အဘိုးဖြစ်သူ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်လို့.ကိုနေမျိုးကျော်ရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူက ပြောပါတယ်..
ကျွန်မသိတာ နေမျိုးကျော်ဆိုတဲ့ NLD လူငယ် လေး တစ်ယောက် အကြောင်း ပါပဲ။ နေမျိုးကျော် ဆိုတဲ့ စက်မူ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား လေး တစ်ယောက် အကြောင်းပါပဲ။ နေဘုန်းလတ် ဆိုတာတော့ သူ ဘလော့ခ်ဂါ တစ်ယောက် အနေနဲ့ ပိုပြီး ထင်ရှား ကျော်ကြားတဲ့ လုပ်ဆောင်မူတွေရှိပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ဘလော့ခ်ဂါ တစ်ယောက်အနေနဲ့တော့ သူ့ကို ကျွန်မ သိပ်မသိခဲ့ဘူးရှင်။ ဒီပို့စ်လေးကတော့ နေမျိုးကျော်ရဲ့ ရပ်တည်ချက်နဲ့ ယုံကြည်မူ နောက် ငြိမ်းချမ်းရေးကို သူသိပ်လိုလားတယ်ဆိုတာ ပြောပြနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
တရားမျတမူတွေ မရှိ မတရားမူချည်း သပ်သပ်သာ ကြီးစိုးနေပြီး တရားစောင့် လောကပါလ နတ်မင်းတွေ မျက်ကွယ်ပြုနေတာ ကြာပြီ ဖြစ်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာ နေမျိုးကျော်တစ်ယောက် ကျမ်းမာပါစေ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်းနဲ့ နေမျိုးကျော်လိုမျိုး စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှာ အချူပ်အနှောင်မိနေရတဲ့ စ်ိတ်ပင်ပမ်းချင်း ကိုယ်ပင်ပမ်းချင်း ကြီးစွာနဲ့ အသက်ရှင် ရုန်းကန်လူပ်ရှားနေရတဲ့ ပြည်သူတွေ လည်း ညှင်းပမ်း နှိပ်စက်ခြင်း ဘေးမှ အမြန်ဆုံး ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းတယ်။
(ကိုလူထွေးစီစဉ်တဲ့ ဘလော့ခ်ဂါများရေးတဲ့ 7july အမှတ်တရပို့စ်လေးကို ပြန်တင်ဖြစ်တာပါ)
Posted by မဆုမွန် at Thursday, March 11, 2010
မဆုမွန်ရေ စိတ် ဆင်းရဲတယ်ကွယ်။
နှမြောလည်း နှမြောတယ်။ ဘာမှလည်း လိုက်လုပ် မပေးနိုင်ဘူး။ ကျန်းမာရဲ့လား မသိနော်။
2010 ရွေးကောက်ပွဲကို ကိုနေမျိုးကျော်များ ကိုယ်စား တက်ညီလက်ညီ ကန့်ကွက်ကြပါစို့...
So sad! I wish him well and free soon.
(က) အကယ်၍ နောက်ဆုံး NLDမှာ မှတ်ပုံတင်ရေး/မတင်ရေးကိစ္စနဲ့ပါတ်သက်လို့ NLDပါတီကြီးကွဲမည့်အနေအထားသို့ ဦးတည်လာလျှင် NLD ပါတီကိုတော့နိုင်ငံရေးအရ အကွဲခံလို့ မရပါဘူး။
(ခ)။ အကယ်လို့မဖြစ်သာသည့်အဆုံး NLD ပါတီအနေဖြင့် မှတ်ပုံတင်ဘို့ ဆုံးဖြတ်မည်ဆိုလျှင်-(၁)အမျိုးသားညီလာခံမှ စွန့်ခွာခဲ့တာမှားသည်ဟု လူထုကိုဝန်ခံရမည်
လူတော်တွေအားလုံး.....ဒီလိုအကျဉ်းချခံ ဘ၀နဲ့ပဲ နိဂုံးချုပ်ရတော့မှာလားဟင် ...။
အားလုံးအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ် ။